आँकका २ पात जसले च्वाट्टै पर्छन सुगर अर्थात् मधुमेह ! – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काठमाडौं । मधुमेह भएका मानिसलाई सामान्य जीवन जिउनका लागि के खाने के नखाने भन्ने विषयमा धेरैथरी परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । रगतमा चिनीको स्तर कम गर्ने खानेकुरा मात्र खानुपर्ने हुन्छ । आँपको पातले चिनीको मात्रा घटाएर मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्न सहायता गर्छ ।
आँपको पातमा पेक्टिन, भिटामिन सी र फाइबर हुन्छ । पातको म्यांगिफरिनमा एन्जाइम अल्फा ग्लुकोसिडेज निकाल्ने क्षमता हुन्छ र यसले आन्द्रामा कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम घटाउन सहायता गर्छ । यसबाछ रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रणमा रहन्छ ।
ग्लुकोजको इन्सुलिन उत्पादन र वितरणलाई थप राम्रो बनाउन यो प्रभावकारी हुन्छ । यसले चिनीको मात्रालाई स्थिर गर्न पनि सहायता गर्छ । आँपको पातले मधुमेह र कोलेस्ट्रोल दुवैलाई नियन्त्रणमा राख्छ । शरीरको खराब कोलेस्ट्रोल स्तरलाई यसले घटाइदिन्छ । बारम्बार पिसाब लाग्ने, तौल घट्ने, धमिलो देखिने जस्ता मधुमेहका लक्षणमा यो प्रभावकारी उपचार हो ।
दशदेखि १५ वटा आँपका पातलाई १०० देखि १५० मिलीलिटर पानीमा उमाल्नुस् । रातभरि त्यसलाई त्यत्तिकै रहन दिनुस् । बिहान त्यो पानीलाई छानेर खाली पेटमा पिउनुस् ।नियमित रूपमा बिहान खाली पेटमा यस्तो पानी पिउँदा केही महिनामै शरीरमा आश्चर्यजनक परिणाम देखिन्छ । यो घरेलु उपचारमा मात्र भर चाहिँ नपर्नुस् । मधुमेहका लक्षण देखिए भने तत्कालै चिकित्सकलाई देखाउनुस् ।अनि खानेकुरामा पनि परहेज गर्ने गर्नुस् ।
Prevवी’र्य दानबाट जन्मिएकी युवतिले खोजेर भेटाइन आफ्ना ६३ भाइ बहिनी !
Nextआफ्नो आधा कलेजो काटेर श्रीमानको शरीरमा प्रत्यारोपण गरिदिने ४८ वर्षीया श्रीमती कमलादेवी
अनौठो संयोग, मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त गरिरहेको बेला, नमुना राष्ट्रपतिमा रुपन्देहीकी २२ वर्षीया प्रकृति पोखरेल निर्वाचित, गृहमन्त्रीमा सुरेन्द्र गिरी